Ma ogtahay guulaha xagaaga ee sanadkan 2017? | Ragga Stylish
Marka la gaaro dhamaadka xagaaga waxaa imaaneysa falanqeyn wixii aan ku riyaaqnay. Qorraxda, ciidda, xeebta, madaddaalada, cayaaraha biyaha, hudheelada waaweyn, magaalooyinka qurxoon ...
Bilahaan waxaan ku raaxeysanay hits xagaaga muusikada. Waxaa jiray wax walba, oo ka yimid kuwa ka yimid xeebaha diiran ee Caribbean, iyo kuwa kale ee maxalliga ah.
Muddo dheer, xagaa kasta wuxuu leeyahay Muusigga Gaarka ah. Muusig la xidhiidha habeenno lama ilaawaan ah. Heesaha codka loogu talagalay waqtiga ugu qosolka badan sanadka.
3 Dhammaantiin afartaa ku faraxsan, Maluma
4 In yar oo aniga ah, Natalia feat DKB
5 2U, David Guetta oo leh Justin Bieber
Doodwanaag, Luis Fonsi feat Daddy Yankee
Heesta soo noqnoqotay ee Puerto Rican Luis Fonsi ayaa noqotay heesta xagaaga. Weli wuxuu leeyahay awood uu ku dhammaystiro wareegga oo uu uga soo gudbo dayrta. Dunida oo dhan waa laga maqlay ... "tallaabo tallaabo, jilicsan jilicsan ... "
Ii diyaari raadiyaha, Enrique Iglesias feat Descemer, Bueno, Zion & Lenox
Enrique Iglesias iyo horumarkiisa dhanka reggaetón iyo laxanka "magaalooyinka" kale. Tani waa hees kale oo jawiga diirineysay tan iyo dhammaadkii jiilaalka.
Dhammaan afartaas baa ku faraxsan, Maluma
Fanaanadan reer Kolombiya ayaa noqotay farshaxan go'an oo ku yaal jaantusyada muusikada ee Ibero-American. Dhammaan afartaas baa ku faraxsan waa heesihiisii ​​ugu dambeeyay. Waxay soo ifbaxday bilowgii xagaaga, waxayna ku dhacday si aad u adag.
In yar oo aniga ah, Natalia feat DKB
Natalia waxay naga wada yaabisay aqalkeeda kuleylaha ah oo ay weheliso heesaa Cuban, qoraa iyo soo saare DKB. Waxay ka socotaa dhammaan saldhigyada, waana tartan u qalma Fonsi, Iglesias iyo Maluma.
DJ-ga Faransiiska ayaa dhowaan soo saaray heesihiisii ​​ugu dambeeyay. Runtii waa iskaashi cusub oo lala yeelanayo sanamka dhalinta reer Kanada ee lagu muransan yahay Justin Bieber. Haddii ay jirto hal hees oo si dhakhso leh u kululeysey xagaaga, waa tan, ka dib markii la gaarey lambarka 1 ee jaantusyada 48 dal wax ka yar 24 saacadood.
Ilaha sawirka: Los Andes / YouTube
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Ma ogtahay guulaha xagaaga ee sanadkan 2017?
H&M waxay soosaaraysaa aruurinta bilicsanaanta buuraha iibka